Iindaba -Uyifaka njani i-makeup, yenze lula ngamanyathelo ama-5 | Ubuhle beKalocils
Inyathelo 1: Isithambisi
Ukufaka isicelo kubugcisa. Ubushelelezi, ulusu olunqabileyo sesona sixhobo sakho sigqwesileyo. Ukufezekisa oku kufuneka uthambise. Hlamba ubuso bakho emva koko uthambe ngokukhululekileyo, unike ulusu lwakho imizuzu embalwa yokufunxa into yokuthambisa okanye ukutshiza.
Inyathelo 2: Primer
I-Primer inceda ukulungiselela ulusu lwakho lokufihla kunye nesiseko, ukuqinisekisa ukuba ziqhubeka ngcono kwaye zihlala ixesha elide. Ikwafihla naziphi na iziphene kwaye inciphise ukubonakala kwepore. Faka isicelo ebusweni nasentanyeni.
Inyathelo 3: Ipensile yamashiya
Amehlo amahle ayimfuneko, abenze bagqame ngepensile yamashiya. Landela umgca wendalo webala lakho usebenzisa umbala okhanyayo kancinci kuneenwele zakho.
Inyathelo 4: I-Eyeshadow, i-Eyeliner kunye neMascara
Nika ubunzulu kunye nenkcazo kwamehlo akho ngesithunzi kunye neliner. Sebenzisa izithunzi ezithathu zethunzi wamehlo, uqale ngowona mbala ubengezelayo phantsi kwelihlo lakho emva koko umbala omnyama ngaphezulu kwesiciko sakho. Bahlanganise ukuze baphephe nayiphi na imigca ebonakalayo. Emva koko faka i-liner yamehlo ecaleni kwesiciko ngqo ngaphezulu kwemivimbo yakho. Sebenzisa i-mascara ukunxiba kwaye uhlukanise yonke into, ubanike inkangeleko etyebileyo, esempilweni.
Inyathelo 5: Ilipstick, iLiner kunye neLip Gloss
I-Lipstick yenye yezona ndawo ziguquguqukayo kwinkangeleko yakho. Unokuxuba kwaye utshatise imibala esekwe kwimeko yakho, iimpahla okanye nexesha losuku. Ngokulinganayo thambisa idyasi yokugcwala ngomlomo emva koko ulayishe imilebe yakho, ugqibezele ngomba wokuhombisa.
Ixesha leposi: Dec-26-2020
Imivimbo yamehlo, I-liner yamehlo, eyeliner, Izandiso zeEyelash, Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo ye-mink,